SEO ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် - သင်၏အော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သင်၏ SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်းနှင့်လမ်းညွှန်များ | Martech Zone
အဆိုပါ SEO Buddy မှ SEO စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း is သင်၏အရေးကြီးသော SEO လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက်သင်၏လမ်းပြမြေပုံ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာပိုမိုရရှိရန်သင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပြည့်စုံသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာများနှင့်မတူဘဲယေဘုယျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား၎င်းတို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်နှင့်ရှာဖွေမှုတွင်မြင်သာမှုကိုအမြင့်ဆုံးကူညီရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
အဆိုပါ SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်းပါဝင်သည်
၁၀၂ ပွိုင့် SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်း Google Sheet
102-Point SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်းဝက်ဘ်လျှောက်လွှာ
၆၂ မျက်နှာရှိစာအုပ် (PDF)
၅၂ ပတ်ကြာအကြောင်းအရာစီစဉ်ခြင်းပြက္ခဒိန်နည်းစနစ် (PDF)
အချက် ၅၀ ပါအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေမှုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း (Google Sheet)
သင်လိုက်နာရန်စံသတ်မှတ်ထားသောလည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (SOPs) ၄၀ ကျော်။
သငျသညျ SEO မှအသစ်နှင့်ရုန်းကန်လျှင်အသစ်သော SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်း ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာ၏ကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာကိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာနှင့်စာရင်းဇယားများဖြင့်သင်၏အရေးကြီးသည့်နည်းဗျူဟာများကိုမလွတ်စေရန်သင်၌ရှိနှင့်ပြီးမလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများကိုခြေရာခံနိုင်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်ကျည်ဆန်ရမှတ်များစာရင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတွင်အသေးစိတ်အဆင့်ဆင့်၊ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်စာရွက်စာတမ်းများပါရှိသည်။ သို့မှသာသင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီဟာကတစ်ကြိမ်တည်းဝယ်လို့လည်းမရတာ။ သင်ဝယ်ယူသောအခါ SEO သည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည် SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်းရလိမ့်မယ် တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်ကိုအခမဲ့အနာဂတ်အတွက်အခမဲ့ရယူပါ.
သငျသညျ SEO SEO နှင့်ပတ်သက်။ အလေးအနက်ထားလျှင်, ဒီဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါကအကြောင်းကိုချစ်သင်ရရှင်းလင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် jigsaw ပဟေuzzleိတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ရုပ်ပုံကိုမြင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သင်ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။
Louise Green၊ စာရင်းသွင်းသူ
အဆိုပါ SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်းပစ်မှတ်ဒေသများ
ဖောင်ဒေးရှင်း - ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးကွန်ယက်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်၊ သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုမည်သို့ခြေရာခံနိုင်မည်၊
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ - ဂူးဂဲလ်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်သို့ဆင်းသက်စဉ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံကိုဂရုစိုက်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ထိုအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရမည်။
အကြောင်းအရာ - သင်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးသောအခါလူများကမျှဝေကြလိမ့်မည်၊ အရည်အသွေးရှိသောဆိုဒ်များက၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
performance - ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ဂူဂဲလ်သည်မြန်ဆန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုနှစ်သက်သည်။
SEO စာမျက်နှာ - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိစာမျက်နှာတိုင်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုစနစ်တကျညွှန်းကိန်းများအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သကဲ့သို့ visitors ည့်သည်များသွားလာရန်လွယ်ကူစေရမည်။
စာမျက်နှာပြင်ပတွင် SEO - သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အသိပညာများဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်သင်၏အခွင့်အာဏာကိုမောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက်လူမှုရေးမီဒီယာများမှတဆင့်တန်ဖိုးမြင့်လင့်များကိုစုဆောင်းပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ SEO - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစနစ်တကျရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊
ဒေသခံ SEO ဆိုသည်မှာ - သင်၏ဒေသဆိုင်ရာစာရင်းများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှစ်ခုလုံးကသင်၏အချက်အလက်များကိုမှန်ကန်ကြောင်းပြသည့်အဓိကလမ်းညွှန်များနှင့်၎င်းတို့အသုံးပြုသူများကသင့်ကိုရှာတွေ့သည့်နေရာများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်။
ဒီဟာအွန်လိုင်းသင်တန်းမဟုတ်ပါဘူး SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်းသည်သာလွန်သော SEO ရလဒ်များကိုရရှိရန်သင်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာအားလုံးနှင့်အတူ SEO အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းပြမြေပုံနှင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းဖြစ်သည်။
Discount Code MARTECHZONE ကိုသုံးပါ
SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်း၏ ၂၅% ကိုသင်လိုချင်လျှင်ကုဒ်နံပါတ်ကိုသုံးပါ Marteczone သင်ငွေရှင်းတဲ့အခါ! ကုန်ပစ္စည်းတွင်သင်ထပ်မံအပိုဆုကြေးများလည်းရလိမ့်မည်။
SEO Buddy မှ SEO Checklist ကိုဝယ်ပါ
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် SEO ဆိုသည်မှာလုပ်ပြီး Buddy.
Tags: စျေးလျှော့ပေးသောနံပါတ်ဂူဂဲလ်စာရင်းဇယားဒေသတွင်း seosite ကို off seoOn-site seoအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုရှာဖွေပါseo သူငယ်ချင်းseo စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းseo အကြောင်းအရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းseo လမ်းညွှန်များseo လမ်းညွှန်seo စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းseo လေ့ကျင့်ရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ seo